संघीयता सिद्धांत हो
यो मान्छे त कहिले कोहीसँग बोल्दैन, यसलाई किन वाक स्वतंत्रता चाहियो भने जस्तो हो झापा मा मधेसी दल ले जित्ने गरेको छैन, झापा किन २ नंबर प्रदेशमा चाहियो? चुनाव जित हारको आधारमा पनि कहीं प्रदेश को सीमांकन हुन्छ? प्रदेश को सीमा प्रत्येक ५ वर्ष मा वोट खसेको आधारमा हेरफेर हुने कुरा होइन।
झापा मा काँग्रेस एमाले जित्छ भने त दंग पर्नुपर्ने बाहुन हरु झन। दुई नंबर प्रदेश को मुख्य मंत्री हाम्रै पार्टी को हुने भो, ल! भन्दै दंगदास हुनुपर्ने। रुवावासी किन? पछिल्लो चुनाव मा धाँधली भएको होइन र काँग्रेस एमाले ले वास्तव मा स्वीप दिएको हो भने त मधेस का दुबै प्रदेश मा काँग्रेस एमाले कै सरकार बन्ने भो। चिन्ता के कुराको पर्यो?
यो सात प्रदेश को सीमांकन नामांकन हाम्रो चाह होइन। हामीले त छुट्टै शेरपा प्रदेश पनि चाहेको हो र अंततः लिन्छौं पनि। तर अहिले लाई यो सात प्रदेश को सीमांकन नामांकन मा सहमति हुन सक्छ भनेको मात्र हो। मधेस र थरुहट नाम नभए पनि हुन्छ। २ नंबर र ५ नंबर नै भन्दिम compromise पोजीशन हो। लचिलो भएको।
तर यो सीमांकन त bottomline हो। नमान्ने भए आधिकारिक रुपले भन, अनि हामी सरकार ढाल्छौं। मगर को पनि क्लस्टर मिलाउ होइन भने प्रवास जाउ।
Constituent assembly constitution federalism Madhesh madhesi madhesi kranti3Magar Nepal Terai tharu